トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Twin Seoul sehatra dingana fahafito ho toy ny "mifanaraka (Reunion)" dia
Tena fomba mandrakizay
mahazo [3500 Yen Free fanombanana] ny hoavy, ny olona roa izay efa mitombo ny amin'izy samy izy mba handresy ny fanahy kambana enina ny dingana ara-panahy dia miditra fifohazana, ny lehibe dia tonga mba hahazoana izany hoe fahasambarana voahodidina lamban-angovo. Ary ny fahafito dia dingana farany ny tonga soa.
tsy mpiara-miasa ihany, ny roa nanomboka handatsaka ny fitiavana tsy misy fepetra ihany koa ny manodidina, tsy misy zavatra efa mampatahotra. Rehefa tonga izany dingana, samy nangataka mihoatra lavitra ny maha samy hafa hambom-pon'ny, ianao, dia te-hihaona indray rehefa ela.
amin'izao dingana, dia lasa iray mba hitady ny antoko hafa, dia afaka mahatsapa fa velona mba mifanaraka. Avy eo, miaraka amin'ny finoana fa mifankatia dia tsy voahozongozona, aminareo fa Sarakedase ny fahamarinana ny tarehy ho fanariana ny hambom-pon'ny.
2 vahoakan 'ny hery tsy misy fepetra nampidina ny fitiavana ho amin'ny tompon-kambana ao amin'ny fanahy sy ny Ambient
dingana fahenina in
? Aer nomena tsy misy fepetra ny fitiavana fifandraisana izay manodidina sambatra, hamela heloka tahaka ny rehetra ka tonga, roa ny fanahy mahatonga ny akony, dia tokony ho afaka hisarihana indray. Ary rehefa milalao ny La R?union, dia manana fifandraisana izay afaka manome akanjo fitiavana tsy misy fepetra ho an'ny antoko hafa.
izany fotoana izany, tsapany fa ny fifandraisany dia ny fanahiko masina kambana izay efa nitondra ny momba ny an'Andriamanitra, takatsika fa misy fifandraisana mafy. Fa izaho efa nahatratra izany dingana, ianao ho Andriamanitra rehetra sy izao rehetra izao dia sambatra. Avy eo, isan-karazany ny zavatra roa no sambatra ny olona nomena, dia afaka mahatsapa ny tsara indrindra ny fahasambarana.
? Tsy vitan'ny mpanohitra dia
kambana Seoul koa manodidina ny olona hidera sy ny fitiavana, ny olona roa fa efa lasa azo atao ny ho tia ny olona miaraka amin-kitsimpo, ny fitiavana ny manodidina ihany koa ny tsy samy hafa Tsy handatsaka be. Misy manovo raha olona roa Tokony fankasitrahana no hanafotra ho famaliana ho an'ny hampifanaraka rehetra no lazaiko amin'izao tontolo izao. Ary ho faly manodidina, roa ny fahasambarana no ho fara tampony. Izany hoy
, tsy midika izany fa mety resy ny handeha ho velona ankehitriny, dia hitsidika isan-karazany ny sarotra. Na izany aza, manohana ny tsirairay samy ao amin'ny herin 'ny fitiavana lehibe roa ny olona, ??ary afaka ihany koa mandray ny fanampiana avy amin'ny firenena manodidina, dia tokony Ikeru sarotra ihany koa ny handresy ny zava-nitranga.
fanahy roa Izao no nankalaza ny dingana fahafito ny _X000D_ dingana farany lasa feno, kambana Seoul Nandray mirindra, ho afaka namita fanahy vatana ara-panahy tonga amin'ny dingana avo indrindra Xiang. Ary ny anankiray ny antsasaky ny olona izay efa niandrandra ny ankehitriny, dia afaka ny ho tonga ny farany hitarika marina.
ho Miakara at?, dia tsy maintsy mandeha amin'ny alalan'ny fitsapana maro. Ny lalana dia tsy tamin'ny fomba fisaka iray, dia tsy maintsy ihany koa ny mangidy. Na izany aza, dia mihevitra fa dingana ihany koa ny amin'izy samy izy niarahaba ny tena fifamatorana, nandinika ny tenanao ao anatin'ny iray dingana iray, dia zava-dehibe ny mandeha miborosy fanahinao.
Kosa, dia tsy maintsy ihany koa ny mangidy. Na izany aza, dia mihevitra fa dingana ihany koa ny amin'izy samy izy niarahaba ny tena fifamatorana, nandinika ny tenanao ao anatin'ny iray dingana iray, dia zava-dehibe ny mandeha miborosy fanahinao.